Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.2.2 keerughi
Data ẹkenịmde ulo oru na ọchịchị na-esiri-eme nnyocha iji nweta.
Na May 2014, ndị US National Nche Agenda meghere a data center ke ime obodo Utah nke nwere ihe ihere aha, na ọgụgụ isi Community Comprehensive National Cybersecurity Initiative Data Center. Otú ọ dị, nke a data center, nke a bịara mara dị ka Utah Data Center, a kọrọ na ihe ịtụnanya ike. Otu akụkọ na-alleges na Utah Data Center bụ ike iji chekwaa ma hazie na ụdị nile nke nkwurịta okwu gụnyere "zuru ọdịnaya nke onwe ozi ịntanetị, ekwentị oku, na Google searches, nakwa dị ka ụdị onye data ụzọ ụkwụ-adọba ụgbọala receipts, njem itineraries , na-ere akwụkwọ ịzụrụ, na ndị ọzọ na dijitalụ 'n'akpa uwe awụba n'oké osimiri' " (Bamford 2012) . Na mgbakwunye na mkpọlite ​​nchegbu banyere mmetụta ọsọ ọsọ ọdịdị nke ukwuu nke ozi weghaara na nnukwu data, nke ga-akọwara ndị ọzọ n'okpuru, na Utah Data Center bụ ihe atụ nke a ọgaranya data isi iyi na-keerughi na-eme nnyocha. More n'ozuzu, ọtụtụ na isi mmalite nke nnukwu data nke ga-aba uru na-eme nnyocha na-achịkwa ma na nanị site ọchịchị (eg, tax data na izi data) na ụlọ ọrụ (eg, gbara ajụjụ ịchọ engines na ekwentị oku meta-data). Ya mere, ndị a data na-agaghị ozugbo dị ka ndị nnyocha nọ na mahadum, na ọtụtụ ga-adịghị ọbụna-abụ dị ka ndị nnyocha na ọchịchị ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Na m ahụmahụ, ọtụtụ ndị nnyocha dabeere na mahadum ghọtahie isi iyi nke a inaccessibility. A data ndị na-apụghị iru bụ n'ihi na ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ndị na ọchịchị iberibe, onye umengwụ ma ọ bụ ọ hụghị gị n'anya. Kama nke ahụ, e nwere oké njọ iwu, teknuzu, achụmnta ego, na usoro ziri ezi ihe mgbochi na-egbochi data ohere. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ okwu-nke-ọrụ nkwekọrịta maka weebụsaịtị naanị ekwe data na-eji site ọrụ ma ọ bụ iji melite ọrụ. Ya mere, ụdị data òkè ike-ekpughe na ụlọ ọrụ ndị ziri ezi emetụtaghị okwu ikpe site na ndị ahịa. E nwekwara ọkpụrụkpụ azụmahịa ize ndụ ka ụlọ ọrụ aka iso data. Gbalịa ghọta otú ọha na eze ga-emeghachi omume ma ọ bụrụ na onye search data mmadụ na mberede leaked si Google dị ka akụkụ nke a mahadum nnyocha. Ndị dị otú ahụ a data iro, ma ọ bụrụ na oké, pụrụ ọbụna ịbụ ihe existential n'ihe ize ndụ maka ụlọ ọrụ. Ya mere, Google-na kasị nnukwu ụlọ ọrụ-na-ize ndụ-egbughị oge n'ịza banyere ekere òkè data na-eme nnyocha.
N'eziokwu, ọ fọrọ nke nta onye ọ bụla bụ na a ọnọdụ iji nye ohere buru ibu nke data maara akụkọ nke Abdur Chowdhury. Na 2006, mgbe ọ dị isi nke AOL nnyocha, ọ na ụma wepụtara ihe o chere e anonymized search gbara ajụjụ si 650.000 AOL ọrụ na nnyocha obodo. Dị ka m nwere ike ịgwa, Chowdhury na-eme nnyocha na AOL bu ezi ihe n'obi na ha chere na ha anonymized ndị data. Ma, ha bụ ndị na-ezighị ezi. Ọ na-ngwa ngwa chọpụtara na data abụghị ndị dị ka amaghị aha dị ka ndị na-eme nnyocha na-eche, na akuko si New York Times na-enwe ike mata ndị na dataset na ala (Barbaro and Zeller Jr 2006) . Ozugbo nsogbu ndị a e chọpụtara, Chowdhury wepụrụ data site AOL si website, ma ọ bụ akaha. The data e reposted on ọzọ mkpokọta weebụ, na ọ ga-ma eleghị anya ka abụ dị mgbe ị na-agụ akwụkwọ a. N'ihi mgbalị ya ịkọrọ data na nnyocha obodo, Chowdhury e chụọ n'ọrụ, na AOL isi technology ojii gbara arụkwaghịm (Hafner 2006) . Dị ka ihe atụ a na-egosi, uru n'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ n'otu n'otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na ikwado data ohere ndị mara mma obere na ndị kasị njọ-achị gị ọchị bụ egwu.
Research nwere ike Otú ọ dị, inweta ohere ka data na bụ keerughi ọha na eze. Ọchịchị nwere usoro na-eme nnyocha nwere ike iso na-etinye maka ohere, na dị ka ihe atụ mgbe e mesịrị ke ibuot emi show, ndị nnyocha pụrụ mgbe ụfọdụ inweta ohere ka ụlọọrụ data. Dị ka ihe atụ, Einav et al. (2015) partnered na a na-eme nchọpụta na eBay na-amụ digital metụtara si online auctions. A ga m agwa ndị ọzọ banyere nnyocha na si a mmekota mgbe e mesịrị na isi (Nkebi 2.4.3.2), ma m banyere ya ugbu a n'ihi na ha niile anọ nke Efrata na m na-ahụ na ihe ịga nke ọma mmekọrịta:-eme nchọpụta mmasị, na-eme nchọpụta ike, ụlọ ọrụ mmasị, na ụlọ ọrụ ikike. Yabụ, Einav na ibe nwere mmasị na ike nke na-amụ online auctions. Na, eBay bụ. Otú ọ dị, m hụrụ ọtụtụ kwere omume mmekota-ada n'ihi na ma na-eme nchọpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ kọrọ otu n'ime ndị a Efrata.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-enwe ike ịzụlite a mmekorita ya na a azụmahịa, Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ndị dị njọ n'ihi na ị. Akpa, ajụjụ na i nwere ike ịjụ ya na data na abụ na a ga-ejedebeghị; na ụlọ ọrụ ndị na-eleghi anya na-ekwe ka nnyocha ndị pụrụ ime ka ha anya ọjọọ. Nke abụọ, ị ga-eleghị anya ọ gaghị enwe ike ịkọrọ gị data ndị ọzọ na-eme nnyocha, nke pụtara na ndị ọzọ na-eme nnyocha ga-enwe ike iji nyochaa na iru gị pụta. Ọzọkwa, ndị a mmekọrịta nwere ike ịmepụta ọ dịghị ihe ọzọ onye ahụ nke a esemokwu mmasị, ebe ndị mmadụ nwere ike iche na gị pụta nọ na-enwe mmetụta gị mmekọrịta. Niile nke ndị a dị njọ nwere ike kwara, ma ọ dị mkpa ka odo anya na-arụ ọrụ na data na-adịghị inweta onye ọ bụla nwere ma upsides na ndị dị njọ.
Ná nchịkọta, nza nke nnukwu data bụ keerughi na-eme nnyocha. E nwere oké njọ iwu, teknuzu, achụmnta ego, na usoro ziri ezi ihe mgbochi na-egbochi data ohere, na ndị a mgbochi ahụ agaghị akwụsị. National ọchịchị n'ozuzu guzosie ike na usoro maka enyere data ohere, ma usoro nwere ike ịbụ ihe ọzọ ad hoc na steti na mpaghara etoju. Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ, na-eme nnyocha nwere ike onye na ụlọ ọrụ iji nweta data ohere, ma nke a nwere ike ịmepụta a dịgasị iche iche nke nsogbu na-eme nnyocha.